Mpamatsy sy ascenseur avo lenta - Mpanamboatra ascenseur feno ao Sina
Elevator trano kely mahomby
Load (kg): 260, 320, 400
Haingam-pandeha (m / s): 0.4, 0.4, 0.4
Haben'ny fiara (CW × CD): 1000 * 800, 1100 * 900,1200 * 1000
Haavo ambony (mm): 2200
Ny escalator dia misy làlan-tohatra sy fantsom-panafody amin'ny lafiny roa. Ny singa lehibe ao anatiny dia misy ny dingana, ny rojo vy ary ny sprockets, ny rafitry ny lalamby, ny rafitra fitaterana lehibe (ao anatin'izany ny motera, ny fitaovana fampivoarana, ny frein ary ny rohy fampitana eo anelanelany, sns.), Ny familiana fiara ary ny lalana tohatra.
Elevator mandoro miaraka amin'ny fampiharana malalaka sy fiarovana avo lenta
Tianhongyi Sightseeing Elevator dia hetsika ara-javakanto izay ahafahan'ny mpandeha miakatra ambony ary mijery lavitra ary tsy mijery ny toerana tsara tarehy eny ivelany mandritra ny fiasana. Izy io koa dia manome ny fiainana toetra mahavelona, ​​izay manokatra fomba vaovao ho an'ny fanaingoana ireo trano maoderina.
Elevator mpandefa zotram-pifandraisana tsy mifangaro
Ny fanondranana entana any Tianhongyi dia mandray ny rafitra fitantanana haingam-pandrefesana miovaova hafainganam-pandeha miovaova, avy amin'ny fahombiazana ka hatramin'ny antsipiriany, fitaterana tsara ho an'ny fitaterana entana mitsangana. Ny ascenseur mpitatitra entana dia manana lalamby mpitari-dalana efatra ary lalamby mpitari-dalana enina.
Ny efitrano masinina Tianhongyi tsy dia misy mpandeha mpandeha mandray ny haitao miharo fampidirana avo lenta amin'ny rafitra fanaraha-maso microcomputer sy ny rafitra inverter, izay manatsara tanteraka ny hafainganan'ny valiny sy ny fitokisan'ny rafitra.
Elevator an'ny mpandeha mihetsiketsika amin'ny efitrano milina
Ny ascenseur Tianhongyi dia mandray milina maharitra tsy miova gearless mihetsika tsy mihetsika, rafitra masinina varavarana fiovam-po varavarana, teknolojia fanaraha-maso mifangaro, rafitra fiarovana varavarana ambaratonga hazavana, jiro fiara mandeha ho azy, fampidirana mora tohina ary fitehirizana angovo bebe kokoa;